Shirweyne Caalami Ah Ka Dhacay Jaamacadda Columbia Ee Dalka Maraykanka Oo Ku Baaqay In Somaliland Laga Barto Hannaanka Nabadaynta Adduunka – somalilandtoday.com
Shirweyne Caalami Ah Ka Dhacay Jaamacadda Columbia Ee Dalka Maraykanka Oo Ku Baaqay In Somaliland Laga Barto Hannaanka Nabadaynta Adduunka
(SLT-Columbia)-Shir caalamiya oo loogu magac daray shirwaynaha mastaqbalka bini’aadamka iyo caqabadaha nabadda adduunka iyo xasiloonida oo muddo laba maalmood ah ka socday Jaamacadda Columbia, ee dalka Maraykanka, ayaa si weyn loogu lafo guray dariiqyada nabadda adduunka loo maro iyo siday dalalka adduunku ugu kala duwan yihiin, isla markaana aanay intooda badani u guulaysan.
Waxa kale oo si wayn loogu lafo guray hannaanka Somaliland u martay geeddi socodka nabadaynta dadkeeda iyo halka ay ka soo bilawday oo loo aqoonsaday in ay tahay jidka ugu wanaagsan ee dunidu nabad ku gaadhi karto.
Aqoonyahanno iyo xeel-dheerayaal khibrado kala duwan oo waawayn u leh siyaasadda, nabadaynta iyo xallinta khilaadaadka iyo aqoonyahano kala duwan oo ka kala socday ururo iyo hay’addo caalamiya oo kulanka ka qayb galay ayaa hoosta ka xariiqay in hannaanka nabadda adduunka ee kor ka bilawga ahi in uu yahay mid aan guul laga gaadhayn isla markaana aan nabad u hor seedi karin caalamka, waxaanay isku raaceen in dunidu u baahan tahay in ay nabadaynta dalalka caalamka ee dagaaladu ka dhaceen xasilintooda loo baahan yahay in loo maro jidkii Somaliland nabadda u martay oo ah dariiqa ugu wanaagsan ee nabad lagu gaadhi karo.
Dalalka Caalamku dariiq khaldan ayey u maraan gaadhitaanka nabada adduunka, kana duwan dariiqa saxan ee Somaliland u abuureen nabadgelyadooda,” ayaa laga sheegay shirweyne ka dhacay dalka Maraykanka. Sida lagu baahiyey wargeyska Mitzpeh dorraad.
Dr. Séverine Autesserre, oo ah khabiirad aqoonta siyaasada caalamka iyo Afrika ka dhigta kulliyada Barnard, ee jaamacada Columbia, ayaa si faahfaahsan uga hadashay hawlahii ay ka caawisay Shirweynaha Qaramada Midoobay wadamada dagaaladu haleeleen. Waxay sharaxaad ka bixisay khibradeeda, isla markaana xaqiijisay in nabadda laga soo dhiso xaga hoose ay ka natiijo wanaagsan tahay, nidaamka xaga sare ee xilligan nabadda lagu raadiyo.
“Abuuritaanka nabadu waa hawl xasaasi ah, isla markaana dariiqyada aynu wakhtigan u marno, kuwo shaqeynaya maaha,” ayey sheegtay.
Dr. Autesserre oo muddo 20 sannadood ah kala shaqeynaysay shirweynaha guud, 11 deegaan oo dagaalo ka dhaceen ayaa sheegtay in dalalku indhaha ka laliyaan arrimaha yaryar, balse muhiimka ah.
“Wadamadu waxay u haystaan in nabada xaga sarre laga soo bilaabo mushkiladaha in ay xaliyaan, iyagoo u haysta in Dimoqraadiyadu tahay furaha nabada,” ayey tidhi.
Dr. Autesserre ayaa tusaale u soo qaadatay habka Somaliland ku gaadhay abuuritaanka nabadgelyada dalkeeda, kuna habboon in caalamku wax ka barto. Waxaanay tidhi “Tusaale Somaliland waa dal dadkeedu awoodeen inay iska kaashadaan abuuritaanka nabada. Waddamo ku yaalla meelo dagaalo ragaadiyeen ayaa ku guulaystay inay ka badbaadaan dhimashada, hareerahooda buux-dhaafisay, taana waxay ku gaadheen nabada ay hoosta ka soo dhsieen.”
“Wadan kasta oo aan cilmi-baadhis ku sameeyey waxaan ogaaday in bulshada caadigu u adeegsadaan xidhiidhadooda inay ku qanciyaan madaxda ciidamada dagaalama inay isu yimaadaan oo wada hadlaan,” ayey Autesserre sheegtay.
Dr. Jennifer Larson, oo kulanka ka hadashay ayaa sidoo kale taageertay fikradii Dr. Autesserre, isla markaana sheegtay in isku-xidhnaanta bulshadu muhiim u tahay nabada, taasina tahay sababta xoojinaysa dhaqanka bulshada iyo ka hortaga khaladaadka shaqsiga.
“Hadaad samaysid wax khaldan bulshada isku xidhan dhexdooda, dadku markiiba degdeg ayey u maqlayaan,” ayey Dr Larson sheegtay.
“Dhamaan fikradahan mar keliya lama wada dhaqan gelin karo, balse waa tusaale ku deyasho leh, dariiqa ay Somaliland nabadaynta u martay” ayey raacisay D.r Autesserre.
Dr. Séverine Autesserre, khabiirad aqoonta siyaasada caalamka iyo Afrika dhigta jaamacadaasi oo ka soo qeybgashay Bandhiga Caalamiga ee Buugaagta Hargeysa, xilli ay booqasho ku timi Somaliland bishii September, sannadkii hore ayaa jeedisay khudbad ku saabsan Nabadgelyada Caalamka iyo guusha gudaha, dariiqyada iyo waxtarkooda.